Park Ji Sung Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ
Welcome! Abanye n'ime akaụntụ gị
aha njirimara gị
Chefuru okwuntughe gị? nweta enyemaka
Naghachi paswọọdụ gị
A paswọọdụ ga-e-ezigara gị.
Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Park Ji Sung Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN
LB na-egosi Full Story of a football footballius kasị mara aha na aha njirimara; 'Ụlọ Ntanị atọ'.
Ụdị nke Park Ji Sung's Biography Facts, gụnyere akụkọ nwata ya, na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe omume ama ama nke ụbọchị nwata ya. Anyị na-agwakwa gị otú kpakpando South Korea si bụrụ onye a ma ama na football.
Nyocha nke United Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya / ndabere mmekọrịta ya na ọtụtụ OFF na ON-Pitch amachaghị banyere ya. Na-ebughi n'ihu, ka anyị bido.
GỤỌ AKWỤKWỌ Akụkọ:
Brandon Williams hoodmụaka Akụkọ Ihe Mere Eziokwu Untold Biography
Park Ji Sung Childhood Akụkọ - Ndụ mbido:
Park Ji-Sung mụrụ na February 25, 1981, na Goheung, South Korea site Park Sung-jong, (nna) na Jang Myung-ja (nne). O tolitere n'obodo Suwon.
Park Ji-sung nwere mmasị ịhụ ndị egwuregwu bọọlụ na-egwu ndụ na TV mgbe ọ bụ nwata. Nke a bụ otú o si zụlite mmasị na egwuregwu ahụ.
Daley Blind Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Agbanyeghị, enwere nsogbu. Ọ bụ nnọọ mkpụmkpụ na obere. Nke a ọ hụrụ dị ka njedebe.
Ụmụaka Jorginho Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
N'ịchọ idozi nsogbu anụ ahụ ya, nne na nna Park ga-aga herbal iji mee ka nwa ha nwoke nwere nkà buru ibu na ogologo.
Ha mere ka ọ ṅụọ mmiri ọgwụ ahịhịa gwakọtara ya na ihe ọṅụṅụ frog esi esi esi na ọbara mgbada, ha nile na-ekwere na ọ ga-enyere ya aka ito eto. Ọ dabara nke ọma, o nyeere aka.
Raphael Varane Child Story Plus Ihe na-emeghi ka ihe omuma
Park Ji-sung nwere obi ike na onwe ya ọzọ wee malite ịmalite bọl ọzọ. Ọ na-egwuri egwu maka ụlọ akwụkwọ elementrị ya ma nwee mmeri site na asọmpi.
N'oge na-adịghị anya tupu a mata ya dị ka otu n'ime ndị na-eto eto na-eto eto na South Korea football. Mgbe ọ gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọ debanyere aha na Mahadum Myongji nke South Korea.
Ndụ ezinụlọ dị na Park Ji:
Aha nna ya bụ Park Sung-jong ebe nne ya bụ Jang Myung-ja. Nne na nna abụọ ahụ rapara n'ahụ ka nwa ha nwoke na-eto eto iji mezuo nrọ ya.
Phil Jones Childhood Story Plus Ihe Na-agbasaghị Ihe Akụkọ
Nne ya, Myung-ja bara ọgaranya karịa nna ya. O nwere mgbe ọ na-elekọta ụlọ ọrụ na-emepụta ígwè na Korea. Ugbu a lara ezumike nka.
Nwunye Park Ji Sung:
Park na-etinyekarị ndụ nke ya na ihe ngosi na ihe ijuanya na mgbasa ozi site n'ịkpọsa agbamakwụkwọ ya na-abịa n'ihu na onye nta akụkọ telivishọn bụ Kim Min Ji na nkwurịta okwu ezumike nká ya.
Ha lụrụ na 27 July 2014 na South Korea. A mụrụ nwa ha na November 2015.
Jonny Evans nwa akụkọ akụkọ na-emeghe akụkọ ihe omuma
Ndị a ma ama jupụtara n'ụlọ ahụ dị ka onye na-agba bọl n'egbughị oge Park Ji Sung na onye nkwusa SBS mbụ Kim Min Ji mere emume agbamakwụkwọ ha na July 27.
Agbamakwụkwọ ahụ mere na Sheraton Grande Walkerhill Hotel mara mma na Seoul. Emere emume a bụ onye nkwusa SBS Bae Sung Jae, a na-akpọkwa abụ ekele ahụ site na onye mgbasa ozi Kim Joo Woo.
Daniel James Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Dị ka a tụrụ anya, ndepụta ndị ọbịa gụnyere ọtụtụ kpakpando a maara nke ọma dịka onye nchịkọ soccer Guus Hiddink, onye nyere Korea aka iru Top 4 n'oge 2002 World Cup, na ibe Manchester United kpakpando Patrice Evra (ezigbo enyi ya na Europe).
Kai Havertz Child Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
Ọ dị mkpa iburu n'uche na Park Ji Sung na Kim Min Ji si n'aka ndị na-amaghị ama na 2011, ma ha abụrụ ọha na eze banyere mmekọrịta ha kemgbe 2013.
Ụmụaka Aaron Wan-Bissaka Akụkọ Nke Na-emeghe Ihe Ndị Na-emeghị Eme
Park Ji Sung Biography Eziokwu - Ọrụ ebere:
Na 5 October 2014, a mara ọkwa na Park ga-ekere òkè dịka onye nnọchiteanya zuru ụwa ọnụ nke Manchester United.
O tinyekwala aka n'ikike ebere nke Asia na-eme kwa afọ na otu ndi otu “Park Ji-Sung na ndị enyi.
Park Ji Sung Bio - Akụkọ nke na-enweghị atụ banyere ọbụbụenyi ya nke karịrị ihe mgbochi niile:
Onye na-agbachitere Manchester United Patrice Evra na Ji Sung Park bụ ezigbo ndị enyi. Ọ bụghị naanị na pitch kama ọ bụ karịa na pitch, dị ka Evra na-enwekarị mmasị ịga leta Park.
Fred Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Ndị Na-akpata Ihe Ndị E Dere n'Aka
Mkparịta ụka dị n'etiti ha emeela ka ụzọ abụọ ahụ dịkwuo n'otu, dị ka ụmụnne. Evra kpọkwara nna Park, Park Sung Jong, Papa.
N'ịbụ ndị bi n'Angland, ndị egwuregwu abụọ ahụ bịara dị nnọọ ukwuu na ibe ha ka ha meriri nsogbu ha ọnụ. Park Sung Jong ugbu a na-ekpughe akụkọ dị iche iche nke ụzọ abụọ ahụ.
Park Sung Jong-
Mgbe Manchester United nwere egwuregwu ná mba ọzọ, ụlọ anyị na-aghọ ebe mgbakọ.
David Beckham Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
Ebe ọ bụ na ebe a na-adọba ụgbọala na-adị oké ọnụ n’ọdụ ụgbọ elu, ọtụtụ ndị egwuregwu na-abịa n’ụlọ anyị ka ha nwee ike isi n’ebe m nọ na-agbaga n’ọdụ ụgbọ elu. Pat, Carlito, VDS, na Berba bụ ndị ahịa na-emebu yana Ji.
M na-atụ ụjọ mgbe niile mgbe m na-anya ha n'ihi na m na-eduga otu ìgwè nke superstars na ọnụ ego ha karịrị 40 nde !!
Ya mere, m ga-mụrụ anya mgbe niile na m kacha mma ma na-agbalị ghara na-eche banyere ịkụ! Mana Evra na-anọnyere m mgbe niile na-egwu njakịrị ya na nke na-ewepụ nchegbu ọ bụla.
Timo Werner nke nwata akụkọ gbasara eziokwu
Mgbe anyị meriri EPL, Evra bụ onye izizi bịara makụọ mụ na nwunye m wee see anyị foto. Ọzọkwa, ọ na-akpọkarị m papa. Nke ahụ bụ otu anyị si dị nso, dịka ezinụlọ.
Evra bụ onye mba France, mana o si Senegal n'ezie. O tolitere n'okporo ámá azụ nke Les Ulis, bụ́ ebe ndị omekome jupụtara.
Otú ọ dị, ọ bụ football nke gbochiri Evra ịgbada n'ụzọ ahụ. Echere m Thierry Henry sikwa na mpaghara ahụ.
Evra na Park bụ otu afọ. Evra dị ntakịrị karịa Ji, mana ha abụọ anaghị ekwu ọtụtụ okwu ma ha abụọ na-eche echiche.
Ma ọ bụ Ruud Van Nistelrooy nke gara aga ma ọ bụ Edwin Van der Sar, ọtụtụ ndị enyi Ji si mba ọzọ, na mpụga UK.
Ndị egwuregwu Britain na-esokarị ibe ha ọgụ, yabụ ndị egwuregwu mba ofesi na-atụkọkọta ọnụ ma na-atụkwasị ibe ha obi.
Park Ji Sung Untold Biography Eziokwu - Enyi na-aga n'ihu…
Ogige na-aga n'ihu… In n'oge ọkọchị nke 2007, n'oge njem Asia, Evra nwere ike ịga Korea. Beforebọchị tupu egwuregwu ahụ, ọ bịara n'ụlọ anyị na Suwon.
Na Manchester, ọ na-ajụkarị anyị ma ọ nwere ike ịga n'ụlọ anyị na Korea ma ọ bụrụ na ọ nwere ohere. Ya mere, o jidere ohere ahụ mgbe Manchester United bịara Korea ịbịa leta anyị.
Ọ bụghị naanị na ọ legharịrị anya n’ụlọ anyị, kamakwa ọ rịọrọ m ma m nwere ike ịkpọrọ ya gaa n’ụlọ ịgba egwu abalị dị na Seoul. Agabeghị m ụlọ ịgba egwu na ndụ m ruo ụbọchị m nyefere Evra chọrọ.
Mụ na Evra hụrụ na mbụ abụghị enyi kama dị ka ndị iro azụ na 2005. Ha na-agbakọ na gburugburu 16 na Njikọ Njikọ, m na-egwu maka PSV na Evra na-egwu maka AS Monaco.
Romelu Lukaku Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Na ụkwụ abụọ, m na-egwuri n'akụkụ aka nri nke midfield na Evra na-egwuri egwu dị ka azụ azụ ma yabụ anyị abụọ na-anọkarị n'ọgụ. N'ikpeazụ, PSV meriri egwuregwu abụọ ahụ 1-0 na 2-0. Mgbe ụfọdụ, Evra na-echeta banyere egwuregwu ahụ.
O kwuru, sị: “Ọ bụ gị ka m na-agba ụkwụ m ogologo abalị, yabụ na achọghị m ịbụ enyi gị.” Enwere m iwe n'obi n'ihi gị. ” N'ụzọ dị ịtụnanya, mụ na Evra chetara egwuregwu ahụ nke ọma. Ekwenyere m na ọ bụ akara aka anyị abụọ iji bụrụ ezigbo ndị enyi.
Mgbe Evra buru ụzọ lọta na Jenụwarị nke 2006, o nwere nsogbu ịhazigharị na otu. N'oge ahụ, Mikael Silvestre na Gabriel Heinze kwadoro ebe ha nọ n'ihu Evra ma ọ nweghị ohere Evra ga-enwe ọganihu.
Mgbe ọ bụla o nwere ohere igwu egwu, ọ na-emehie ihe na nke na-efu ya ọnọdụ ya. Ọ na-awakpo ya nke na mgbe ụfọdụ ọ chefuru ọrụ nchebe ya wee hapụ onye nwe akara ya ka ọ na-agagharị.
N'ụzọ dị mwute, a kpọrọ ya aha ahụ "Fullback na-adịghị alaghachi" site n'akụkụ ụfọdụ nke ndị na-akwado Utd. N'oge ndị ahụ siri ike, ọ bụ m kasiri Evra obi ma nye ya ubu ka ọ dabere na ya.
Andy Cole Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Agwara m Evra banyere oge ihe tara akpụ m nwetara laa azụ na Netherlands ma gbalịa ime ka obi sie ya ike na ọ dị ya mkpa.
Anyị na Evra ghọrọ ezigbo enyi mgbe m kwagara n'akụkụ ụlọ ya na February 2007. Mgbe ọ bụla nwunye Evra, Patricia (Aha mbụ Evra bụ Patrice na aha nwunye ya bụ Patricia), na-akpọrọ ụmụ ya gaa leta ndị ikwu na France, Evra bịara n'ụlọ anyị wee dozie dị ka a ga-asị na ọ bụ ụlọ ya.
Neymar Child Story Plus Ihe Ntughari Ihe Ozo
Mgbe ụfọdụ, ọ na-akpọ m òkù n’ụlọ ya, anyị na-anọkọkwa. Echere m na ọ bụ otú ahụ ka Evra si akwụghachi obiọma m meere ya. Mgbe a wara m ahụ na nkwonkwo ụkwụ aka ekpe ya, echetara m Evra na-ede ozi nke ọma na nkedo ya.
Mgbe a wara m ahụ n'ikpere aka nri ya n'oge opupu ihe ubi nke 2007, Evra raara m ihe mgbaru ọsọ o meriri na 7-1 nke Roma.
Park Ji Sung Akụkọ Na-adịghị Agbanwe Eziokwu - Continuga n'ihu:
Nna Evra bi na Dakar, Senegal. Evra na-ekwu na, n'ihi na nna ya lụrụ ọtụtụ oge, mgbe ọ bụla ọ laghachiri n'obodo ya, enwere Evra ebe a, Evra ebe ahụ na Evra Evra ebe niile.
Nna Evra na-anọkarị na Senegal, mana ọ bịara ileta Manchester otu ụbọchị. Evra nwere obi uto banyere olile anya igwu n'ihu nna ya na Old Trafford. Otú ọ dị, Ferguson kpebiri itinye Evra na bench na mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, Evra were oke iwe.
O jidere iwe ya n’ime ụlọ mana mgbe ọ lara n’ụlọ ọ gbawara. O tiri mkpu ma malite ịtụ ihe n'ala. O doro anya na ọ chọrọ ime ka nna ya dị mpako. Elere m Evra anya ma chere "gịnị ma ọ bụrụ na nke ahụ mere m?" Anaghị m ekwupụta mmetụta m.
M na-ezochi ya. Agbanyeghị, enwere m ike ịgwa ya na obi adịghị ya mma mgbe ọ tụfuru ohere igwu egwu na klas CL nke anyị nwere. Mgbe ụfọdụ, ọ na-adị m ka m bụrụ onye na-ekwupụta mmetụta m dịka Evra.
N'ime otu afọ kwesịrị ntụkwasị obi, anyị kwagara n'ụlọ Evra bi na ya. Ọ bụ okpukpu atọ nwere ọnụ ụlọ asaa. Evra kwagara ihe dị ka minit 3-4 site n'ụlọ anyị.
Paul Pogba Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
Mgbe m gara ọzụzụ, mụ na Evra na-ejikọkarị ụgbọ ala. Otu ụbọchị ọ ga-abụ m na-anya ụgbọ ala ma n'echi ya ọ bụ Evra. Mgbe ọzụzụ gachara, anyị abụọ na-aga ụlọ oriri na ọ Koreanụ Koreanụ Korea oge ụfọdụ iri nri.
Ịhụnanya Evra n'ebe Utd nọ siri ike. O nwetara nnukwu uru n'aka Inter Milan mana ọ jụrụ ozugbo.
Mgbe ọ bụla ya na m na-egwu egwuregwu bọọlụ, ahụtụbeghị m ka ọ họpụtara otu egwuregwu na-abụghị Utd. Ugbu a, anyị nọ na CL ikpeazụ ọnụ ọzọ.
Fewbọchị ole na ole gara aga, Evra gwara m “Hey enyi, n’afọ gara aga, anyị agaghị egwuri egwu, ma ugbu a, ka anyị mee nke a ọnụ. Cheta, ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime anyị akara, anyị ga-emekọ ọnụ. ”
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ nwata anyị Park Ji Sung gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ.
At LifeBogger, anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi mgbe anyị na-ebuga gị Akụkọ ndụ ndị egwuregwu bọọlụ Eshia Oceania. Ọ bụrụ na ịhụ ihe na -adịghị mma n'isiokwu a, biko tinye nkọwa gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Akụkọ nwata Karim Adeyemi gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akụkọ nwata Paul Onuachu gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akụkọ nwata Marc Cucurella gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Akụkọ nwata Maxwel Cornet gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Otu nwoke na-eme egwuregwu na United Football
Akwụkwọ akụkọ South Korean Football
njikọ ISIOKWUỌZỌ SITE EDEMEDE
EGO AFRICAN FOOTBALL
Axel Tuanzebe Nwa akwukwo akuko nke oma
Ndị egwuregwu bọọlụ Ivory Coast
Amad Diallo Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee
Dean Henderson Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Ndị na-agba ọsọ agba agba
Eric Cantona hoodmụaka Akụkọ Banyere Untold Biography Eziokwu
Mason Greenwood Akụkọ nwata na gbakwunyere Eziokwu Biography Eziokwu
Ndị egwuregwu bọọlụ Portuguese
Nwa nke Bruno Fernandes Akụkọ nke Na-emeghe Eziokwu
Ndị egwuregwu bọọlụ Welsh
Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch
Donny van de Beek Child Akụkọ Plus na-enweghị isi akụkọ eziokwu
Jadon Sancho Childhood Story Plus Ihe Na-emeghi Ihe Ozo
Ndị na-elekọta bọl
Ole Gunnar Solskjaer Akụkọ nwata gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
ihe nchoputa ohuru ohuru nzaghachi ọhụrụ na ihe m kwuru
Lee echiche niile
ỌZỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ
Nwere ike 23, 2021
Gbanye na LIFBOGGER Akụkọ!
Ekwenyere m na iwu nzuzo na usoro. (njikọ)
AKWORKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ
Kylian Mbappe Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nso
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ụmụaka Akụkọ Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu
Mohamed Salah Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
N'Golo Kante Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
AKW !!KWỌ !! LifeBogger anaghị ekwu na ọ nwere foto ọ bụla edepụtara na weebụsaịtị a. Ọzọkwa, anyị anaghị ewebata ihe osise ma ọ bụ vidiyo. Naanị ndị ode akwụkwọ anyị ga - ejikọ onye nwe ya. N'ikpeazụ, LifeBogger ejiriwo nlezianya tụlee ma nyochaa ọdịnaya ya niile. N’agbanyeghi nke ahụ, ọ nwere ike ịbụ na ozi ụfọdụ nwere ike ịbụ akụkọ ochie ma ọ bụ ezughi ezu.
Kpọtụrụ anyị: admin@lifebogger.com
B LifeBogger Copyright © 2021.
Jiri obi ọma debanye na Lifebogger!
Nweta Akụkọ bọọlụ na Igbe mbata gị
Idenye aha ugbu a!
Mechie popup a